Home / Two Types of inspiration
ကျွန်တော်တို့ ဖတ်နေကြ စာအုပ်တွေမှာလည်း ပါလေ့ရှိတယ်၊ Social Media ပေါ်မှာလည်း ခဏခဏတွေ့ရတယ်၊ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ လူတွေရဲ့ အမေးအဖြေတွေမှာလည်း သူတို့ပြောနေကြ စကားလုံးတစ်ခုရှိပါတယ်။ Inspiration ဆိုတဲ့စကားလုံးပါ။
“What inspire me most is …” တို့
“ဒီကနေ တဆင့် Inspiration ရလာတာ …” တို့
“ဘယ်ကနေ Inspiration ကို ရှာတွေ့သွားလဲဆိုရင် …” စတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးနေကြ ဖြစ်မှာပါ။
သူတို့ ပြောပြောနေကြတဲ့ အဲ့ဒီ Inspiration ဆိုတာကို ဘယ်ကရနိုင်မလဲ? ဘာကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြောနေကြတာလဲ? ကျွန်တော်တို့လို ကျောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့ရော ဘယ်လိုအရာတွေကနေတဆင့် Inspire ဖြစ်စေနိုင်လဲ တွေးကြည့်ကြဖူးလား?
ဒီတော့ Inspiration ဆိုတာ ဘာများလဲ ဆိုတာကနေ စလိုက်ရအောင်။
▪️တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အိုင်ဒီယာကောင်း တစ်ခုလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။
Creativity နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ပြောရမယ်ဆိုရင် Creative အဖြစ်ဆုံး အသစ်ဆုံး တစ်ခုခု ပြုလုပ်ဖို့ တွေးတော ကြံဆနေချိန်ကို “Waiting For Inspiration” လို့ ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့။
ဒီတော့ တစုံတစ်ခု ကနေတဆင့် Inspire ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု ဖန်တီးမှု တစ်ခုခုကို ယုံကြည်ချက် ရှိရှိနဲ့ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရာ ကိုယ့်အတွက် တွန်းအား ရရှိသွားတဲ့ ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Inspiration ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်နိုင်လဲ?
သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာထက် ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရင် Passive Inspiration နဲ့ Active Inspiration ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Passive Inspiration ဆိုတာ အခြား တစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အတွေးအခေါ်တွေက တဆင့် ကိုယ့်အတွက် Inspire ဖြစ်လာစေတာမျိုးပါ။ ဗီဒီယို တစ်ခုကြည့်လိုက်တယ်။ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ဖတ်လိုက်တယ်၊ အင်တာဗျူး တစ်ခု ကြည့်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် တစ်ခုခု ရသွားတယ်။
ဒါဟာ Passive Inspiration ပါပဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်မှာ ဒီလို ယူတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းရှိနေဖို့တော့ လိုပါတယ်။ အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အကြောင်းအရာတွေ နားထောင်တယ်။
သိလိုက်ရတယ်။ အနည်းနဲ့အများတော့ ခွန်အားတွေ ရရှိသွားတယ်။ အားကျတယ်။ အောင်မြင်လိုစိတ်ရှိသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုနေရာမှာတင် ရပ်လိုက်ပြီး လက်တွေ့ဘဝအတွက် အသုံးမချဘူးဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် ထူးထူးခြားခြား ဘာရလဒ်မှ ရလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Active Inspiration ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်ကြောင့်ပဲ ကိုယ့်မှာ စိတ်ခွန်အားတွေထပ်ပြီး ရရှိလာတာကို ပြောတာပါ။ Long Term Passion နဲ့ Enthusiasm ပေါ်အခြေခံပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆန်းသစ် တီထွင်မှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့။ အောင်မြင်ပြီးသား လူတွေရဲ့ ဘဝတွေ အကြောင်း ဖတ်ရမြင်ရတဲ့အခါ အားကျစိတ်နဲ့ သူတို့လို ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး တွေးကြည့်ဖူးကြတယ်ဆိုတာက မိနစ်ပိုင်းလောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝအတွက် အကောင်းဆုံး တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ စိတ်ကူးစိတ်သန်း အသစ်အဆန်းတွေနဲ့အတူ လက်တွေ့ပြောင်းလဲ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လောက် ဘယ်အရာကမှ ကိုယ့်အတွက် Inspire မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်က ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ ဒီလို Inspiration ဆိုတာတွေက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သေးဘူးလို့ တွေးလိုက်ရင် အမှားကြီးမှားမှာပါ။ ကျောင်းသားဘဝအနေနဲ့ သင်ထားတတ်ထားတဲ့ ပညာရပ်တွေနဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Self-Improvement ပိုင်းကနေစလို့ Goal တွေ Milestone တွေအထိပါ Inspire ဖြစ်နိုင်စရာ လေ့လာသင်ယူဖန်တီးနိုင်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ မျက်စိဖွင့်ရင်းရှာဖွေကြည့်ပါ။
Inspiration ကို ဘယ်လို တွေ့နိုင်လဲ?
Everywhere လို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာ အရာ အားလုံးလိိုလို Inspiration အတွက် Source တွေချည်းပဲလို့ဆိုပါရစေ။
နေရာတိုင်းတွေ့နိုင်ပေမယ့် အတင်းလုပ်ယူလို့မရတဲ့အရာပါ။ ရုတ်တရက် ချက်ချင်းဆိုသလို ရတတ်တာမျိုးမို့ သေချာ အစီအစဉ်ဆွဲပြီး ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုး လုပ်လို့မရတဲ့ အရာပါ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း၊ ကဗျာ ဆောင်းပါးတွေ ဖတ်နေရင်း၊ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လမ်းမှာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို မြင်လိုက်ရင်း ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာ အတွေးအခေါ် အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရလာတာမျိုးပါ။
ဆိုတော့ ကိုယ်နေထိုင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Inspire ဖြစ်စရာ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဗဟုသုတတွေ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ လူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လေ သင့်အတွက် အခွင့်အရေးက ပိုများလေပါပဲ။
ဘယ်လို အခြေအနေတွေက တဆင့် Inspiration ရှာနိုင်လဲ?
အခြေအနေ သုံးမျိုး ခွဲခြား နိုင်ပါတယ်။
▪️ပထမဆုံးက အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ တမင်ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ယူတာမျိုး၊ အစီအစဉ်ချပြီး လုပ်ယူရတာမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် ရုတ်တရက် ပေါ်လာတာမျိုးကနေ ဖြစ်လာတာပဲ များပါတယ်။
ဥပမာ - အလွယ်ပြောရရင် ကျောင်းကပေးတဲ့ Assignment လုပ်ဖို့ Project လုပ်ဖို့ Idea တစ်ခုခုကို ရုပ်ရှင်ထဲက တဆင့် ရလိုက်တာမျိုး၊ လမ်းလျှောက်နေရင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့် အတွေးပေါက်သွားတာမျိုးပေါ့။
▪️နောက်ပြီး နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နေရတာမျိုး မဟုတ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကနေပေါ့။ ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ ရင်းနှီးတယ် သေချာ သိရှိနားလည်ထားတယ်၊ ဒီကနေ တဆင့် ရုတ်တရက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ နောက်ထပ် အသစ်အသစ်တွေကို စဉ်းစားမိသွားတာမျိုးပေါ့။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Motivation ကနေပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တစ်ခုခု အသစ်အဆန်းလုပ်ဖို့ ကြိုးစားအားပေးနေမိတဲ့အခါ ကိုယ် တွေးနေကြတွေကတဆင့် ထပ်ပွားပြီး အသစ်အသစ်တွေ တွေးမိလာတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ Motivation ကြောင့်ပဲ ကိုယ်တစ်ခါမှ မတွေးဖူးဘူးတဲ့ ပုံစံအသစ်တွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ရှုထောင့် အသစ်ကနေ အမြင် အသစ်အဆန်းတွေ ပေါ်လာတတ်မျိုး ပါ။
ဆိုတော့ များပြားလှတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ အောင်မြင်သူတွေနဲ့ Inspiration ရစရာ အဖြစ်အပျက်တွေ နေရာတွေနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေ တတ်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။
ဒါ့အပြင် ဒီလို ရရှိလိုက်တာတွေကနေလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
“Inspiration is the act of drawing upachair to the writing desk.” ဆိုသလိုပါပဲ။
ထိုင်နေရုံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်က မြင်တတ်၊ ကြည့်တတ်၊ ယူတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးသော Inspiration တွေကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရင်း ကိုယ်ပိုင် အရည်အသွေးတွေကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။